Note to Correspondents: Statement by the Secretary-General's Special Envoy on Myanmar | United Nations in Myanmar
Note to Correspondents: Statement by the Secretary-General's Special Envoy on Myanmar
The Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar, Christine Schraner Burgener, strongly condemns the continuing bloodshed in the country as the military defies international calls, including from the Security Council, for restraint, dialogue and full respect for human rights and fundamental freedoms.
The Special Envoy has personally heard from contacts in Myanmar heartbreaking accounts of killings, mistreatment of demonstrators and torture of prisoners over the weekend. The ongoing brutality, including against medical personnel and destruction of public infrastructure, severely undermines any prospects for peace and stability. The international community, including regional actors, must come together in solidarity with the people of Myanmar and their democratic aspirations.
The Special Envoy remains in close contact with regional leaders and Security Council members and relies on their continued support towards her efforts to calm the situation.
၂၀၂၁ မတ်လ ၁၄ ရက်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်မှ ထုတ်ပြန်ချက်
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener က မြန်မာစစ်တပ်သည် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆွေးနွေးဖလှယ်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးများ၊ အခြေခံ လွတ်လပ်ခွင့်များကို လေးစားရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုနေမှုများအား ဆန့်ကျင်ဖီဆန်လျက် နိုင်ငံတွင်း သွေးထွက်သံယိုမှုများ၊ သေကျေဒဏ်ရာရမှုများ ဖြစ်ပွားအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှုများကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချလိုက်သည်။
အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ပြီးခဲ့သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ရက်များတွင် စိတ်နှလုံးကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလှ သည့် ဆန္ဒပြသူများအား သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် မလျော်မကန်ဆက်ဆံမှုများ၊ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား သူများအား နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ သူမနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူများထံမှ ကိုယ်တိုင် ကြားသိခဲ့ရသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအပေါ် ကျူးလွန်မှုများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးမှုများအပါအဝင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် လူမဆန်သောလုပ်ရပ်များ သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရေး အလားအလာများကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက် လျော့ပါးစေလျက်ရှိသည်။ ဒေသတွင်းမှလုပ်ဆောင်သူများအပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူများနှင့်အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်၍ ၎င်းတို့၏ ဒီမိုကရေစီအား လိုလား တောင့်တမှုများအတွက် အတူတကွ ဆောင်ရွက်ပေးကြရမည်ဖြစ်သည်။
အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် ဒေသတွင်းရှိ ခေါင်းဆောင်များ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ဆက်သွယ်လျက်ရှိပြီး ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အခြေအနေများ တည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရေး သူမ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအား ၎င်းတို့၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးကူညီပေးမှုများအပေါ် အားထား၍ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။